Pọdkastị: AfricaArXiv na TCC Mmekọrịta Africa maka nhụta nyocha Africa - AfricaArXiv
bipụtara Johanssen Obanda on 7th December 2021 7th December 2021
N'October 2021, AfricaArXiv, Portal Open Access Africa, ekwuputara mmekorita ya na Ụlọ Ọrụ Ọzụzụ na Nkwukọrịta TCC Africa iji wuo ma jikwaa obodo ndị ọkà mmụta mba ụwa nke ga-eme ka ọhụhụ nke nyocha Africa dịkwuo mma. Joy Owango sitere na TCC Africa na Dr. Johanna Havemann sitere na AfricArXiv na-ekekọrịta ihe omimi gbasara mmekorita na pọdkastị a nke a na-akpọ Velocity of Content, nke Chris Kenneally kwadoro, sitere na Ụlọ Ọrụ Nleba Nwebiisinka: https://velocityofcontentpodcast.com/an-african-platform-for-african-research/
Pọdkastị: Platform Afrịka maka nyocha Africa ya na Dr. Jo Havemann na Joy Owango
"Nke a bụ ikpo okwu nke ndị Africa, maka ndị Africa, na nyocha ndị Africa. Ọ nweghị ike ịka nke ahụ, ”Owango na-agwa CCC Chris Kenneally.
"TCC Africa abụrụla onye na-akwado nkwado nke ọrụ anyị, na anyị arụworị ọrụ ọnụ na-anọghị n'usoro, dị ka ndị mmadụ na òtù dị iche iche na-eme na gburugburu ebe obibi na nhazi nhazi," ka ọ na-akọwa. "Site na ọkwa mmekorita a, anyị bịara ebe a iji kwalite ọrụ anyị yana inye AfricArXiv ụlọ na Kenya, ebe TCC Africa ga-ahụta dị ka onye mmekọ a pụrụ ịdabere na ya maka ndị na-ahụ maka Africa na ụlọ ọrụ."
Categories:	Njikọ AkaPodcast
Tags: Nchoputa nke nyocha Africaimegheemeghe sayensịTCC Africa
Echiche Afrịka na Ntụle ndị ọgbọ: Mkparịta ụka gbara okirikiri
AfricArXiv, Eider Africa, TCC Africa, na PREreview nwere obi ụtọ ịnabata mkparịta ụka ogologo oge dị nkeji iri isii, na-ebute echiche Afrịka na mkparịta ụka zuru ụwa ọnụ gburugburu isiokwu afọ 'Peer Review Week', "njirimara n'ime nyocha ndị ọgbọ". Anyị na ọtụtụ ndị editọ Africa, ndị na-enyocha ya na ndị nyocha ọrụ oge mbụ, anyị ga-enyocha njirimara mgbanwe nke ndị nyocha na kọntinent Africa, site n'echiche kachasị nke na-ahụ ha dị ka ndị na-azụ ihe ọmụma mepụtara na ọnọdụ ndị ọzọ nye ndị nyocha na-arụsi ọrụ ike. na nyocha ndị ọgbọ agụmakwụkwọ. Anyị ga -agba mbọ ịmepụta oghere dị mma maka ịtụgharị uche n'okwu gbasara imeziwanye ihe ọmụma nke ndị ọkà mmụta, enweghị mmasị na nyocha ndị ọgbọ, na imeghe omume nyocha ndị ọgbọ na -agbanwe agbanwe.